» बाढी पीडितका दबिएका स्वर : के खाने, कसरी बच्ने ?
बाढी पीडितका दबिएका स्वर : के खाने, कसरी बच्ने ?
२ श्रावण २०७६, बिहीबार २०:४२ प्रकाशित
सप्तरी, साउन ०२ – घरको चुलो गजगजे हिलोले पुरिएका, सामान हिलोले लतपतिएका र भिजेको एक पोको चामल घाम लागेको मौका छोपेर आँगनको ओभानो भागमा सुकाइएको थियो ।
यो दृश्यमा बुधबार अपराह्न बाढीले पुरेका भाँडाकुँडा र खाद्यान्न पाइन्छ कि भनेर मझेरी खोतल्दै छन् सप्तरीको तिलाठी-कोइलाडी गाउँपालिका-१ का त्रिभुवन मिश्र । बाढीले बगाउनबाट जोगिएका सामान बचेको छ कि भन्ने आशले उनी पाँगोले भरिएको मझेरी खोतल्दै थिए । श्रीमती श्यामादेवीले सघाउँदै थिइन् ।
तीन दिन भूजाको भरमा बसेका मिश्र दम्पतीले बाढीबाट बचेको अन्न पकाएर बुधबारदेखि सामान्य पेट भर्न थालेका छन् । उनको घरभित्र भरिएको पाँगो माटो देख्दा जो कोहीको मन भक्कानिन्छ ।
मिश्र परिवारमा यो समस्या भएको पहिलो भने होइन । उनी भन्छन् , ‘समस्या मेरो २०औँ वर्षदेखि यही कुरा छ, राजाको पालादेखि अहिलेसम्म समस्यैसमस्या, अब हामी कसरी बच्ने ?’ उनको मनको वह अझै रोकिएन ।’म बर्बात् छु बरबात्, सबै सम्पत्ति हेर्नुस्, धानचामल छैन, भोलि के खाने, अहिलेसम्म सरकारको राहत पाएको छैन ।’
विडम्बनाको कुरो त हरेक वर्षजसो नै उनीहरू पीडित बनेका छन् । आएको राहत टाठाबाठाले मात्रै कुम्याउँछन् । त्रिभुवनका अनुसार कमजोर र गरीब परिवारले राहत पाउनै मुस्किल छ । ‘अरु साल पनि राहत आउँथ्यो, उनीहरुकै मान्छे राख्छन्, बाँडीचुँडी खान्छन्, हामीले केही भेट्दैनौँ’, मिश्रले विगतको अनुभवसहितको पीडा पोखे ।
घर ओभाने बनेको छैन । खाने अन्न छैन, लगाउने कपडा छैन, बस्ने बास छैन, रातमा निद्रा छैन । स्थानीय सत्यनाथ मिश्र भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था एकदम बिग्रेको छ, सबैको घरमा पानी नै पानी छ, जग्गा जमीन पुरिदिएको छ, खाना पकाउन सकिएको छैन र सरकारको कुनै सुविधा आएको छैन ।’
तिलाठी-कोइलाडीका महेश्वर झा खाँडो खोलाले कृषिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘बीउ जति थियो, त्यो बगीहाल्यो, अब किसानसँग बीउ नै छैन, धान कसरी फल्छ ?’ झा प्रतिप्रश्न गर्छन् । घर भत्किएको र भाँडाकुँडा बगाएर पीडित बनेका स्थानीय बाढीको डर कम भए पनि गाँस, बास र कपासको जोहो गर्ने पीडा थपिएको उनी बताउँछन् ।
साल्ट ट्रेडिङका पूर्वकर्मचारी शतिशचन्द्र झाले खेतीयोग्य जमीन बगर बनेको र बीउ हिलोले पुर्दा किसानलाई ठूलो मर्का परेको बताए । ‘पक्की घर बच्या छ, अरु बच्या छैन, चाँडोभन्दा चाँडो यो खाँडो खोलाको बाँध बन्नु पर्‍यो, अनि ढुक्कसँग निद्रा लाग्छ,’ झाले गाउँको अवस्था बताए ।
सप्तरीमा मानवीय क्षति नभए पनि बस्ती र खेतीबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले चार हजार ५०० घरपरिवार प्रभावित भएको बताए । उनले राहत वितरणको काम जारी रहेको भन्दै छुटेका भए खोजेर वितरण गर्ने बताए । यहाँको केही स्थान अझै डुबानमा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश नं २ को विवरणअनुसार यहाँका आठ जिल्लामा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । रौतहटमा मात्रै १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश नं २ मा एक लाख १८ हजार घरका सात लाख व्यक्ति प्रभावित छन् । तीन हजार ६५० घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । लालबकैया, कमला र वाग्मतीलगायत साना खहरे खोलाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।
अर्थका कारण राहतमा कुनै कमी हुन नदिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको हरेक जिल्लामा तत्कालका लागि १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको र मृतक परिवारलाई प्रतिमृतक तीन लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
राहत वितरण कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्ने संयन्त्र नहुने हो भने वास्तविक पीडितले राहत नपाउने गुनासो स्थानीयको छ । सप्तरीका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले यसपटक आँकलन गरिएको भन्दा बेग्लैरुपमा बाढी र डुुबान भएको बताउँछन् ।
ललितपुर र सिराहामा छ/छ तथा मोरङ, भोजपुर, धनुषा, मकवानपुर र सिन्धुलीमा पाँच/पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ओखलढुङ्गा, महोत्तरी र डोल्पामा चार/चार तथा झापा, खोटाङ, पर्सा, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौँमा तीन/तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै सुनसरी, बारा, धादिङ र दाङमा दुई/दुई, इलाम, पाँचथर, सङ्खुवासभा, उदयपुर, सर्लाही रामेछाप, पाल्पा र कपिलवस्तुमा एक/एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।